Tamin'ity taona ity Aya sy ny mpamosavy, ny sarimihetsika 3D voalohany avy amin'ny Studio Ghibli | Famoronana an-tserasera
Si Hayao dia be fametraham-pitenenana foana mankany 3D, dia nahagaga anay izany rehefa ny zanany lahy manokana no miandraikitra ny fitarihana an'i Aya sy ny mpamosavy, Sarimihetsika CGI voalohany an'i Studio Ghibli.
Tsy saro-kenatra velively i Hayao Miyazaki haneho ny tsy fitakiany amin'ny nomerika sy izay rehetra miasa miaraka amin'ny solosaina. Raha ny marina dia niavaka hatrany ny Studio Ghibli noho izy sarimihetsika sarimihetsika asa tanana indrindra; indrindra amin'ny vanim-potoana niomerika izay ahafahan'ny informatika manao ny zava-drehetra.
Ho an'ny ririnina amin'ity taona ity, hivoaka ny sarimihetsika CGI voalohany avy amin'ny Studio Ghibli, Aya ary ny mpamosavy. Miorina amin'ny boky Earwig and the Witch nosoratan'i Diana Wynne Jones, ary ilay fantatsika avy ao amin'ny Castle Enchanted ao Ghibli, dia ny zanakalahin'i Hayao Miyazaki, Goro Miyazaki, izay misahana ny fitantanana ity sarimihetsika 3D miaina ity.
Raha miresaka momba ny studio fampihetsiketsehana isika izay 10% monja amin'ny famokarana azy no mampiasa ny teknolojia CGI, miatrika hetsika saika tsy mahazatra isika ary dia afaka manamarika a mialoha sy aorian'ny Studio Ghibli. Iza no milaza amintsika fa tsy ny zanany lahy no maka ny vavolon'ny rainy ary mandray an'i Studio Ghibli amin'ny lalana hafa, nefa tsy manadino ny fotony.
Ary miresaka momba Aya izahay ary ny mpamosavy dia a vita tanteraka amin'ny 3D CGI. Na izany na tsy izany, ho an'ireo purista, amin'ny taona 2023 dia hanana sarimihetsika Studio Ghibli vaovao izahay amin'ny endrika fantatsika rehetra.
Aya sy ny mpamosavy dia mitondra antsika amin'ny tantara mahafinaritra mahafinaritra izay i kamboty Aya dia raisin'ny mpamosavy feno fankahalana. Manolotra saka miteny sy trano manenjika, manana ny akora ho an'ny majika sarimihetsika amin'ity studio fampandehanana ity. Miandry izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Aya and the Witch no sarimihetsika 3D voalohany an'ny Studio Ghibli
Banksy dia naneho ny fahatezerany tamin'ny famonoana an'i George Floyd tamin'ny sary vaovao izay milaza izany rehetra izany